Miaina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra - Church of God Switzerland of the World
haino aman-jery > Journal succession > Journal succession 2019-01 > Miaina ao amin'ny fitiavan'Andriamanitra
Tao amin’ny taratasiny ho an’ny Romanina, i Paoly dia nametraka izao fanontaniana izao: “Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? Fahoriana sa tahotra sa fanenjehana sa mosary sa fitanjahana sa loza sa sabatra?" (Romana 8,35).
Marina tokoa fa tsy misy mahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy, izay aseho mazava amintsika eto, araka ny vakintsika amin’ireto andininy manaraka ireto: «Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na hery, na fahefana, na ankehitriny, na ho avy » Na ambony na ambany, na inona na inona zavaboary hafa, dia tsy hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’Andriamanitra izay ao amin’i Kristy Jesosy Tompontsika.” (Romana 8,38- iray).
Tsy afaka misaraka amin’ny fitiavan’Andriamanitra isika satria tia antsika mandrakariva Izy. Tia antsika izy na manao soa na ratsy isika, na mandresy na resy, na tsara na ratsy. Na mino na tsia fa tia antsika izy! Naniraka an’i Jesosy Kristy Zanany Izy mba ho faty ho antsika. Jesosy Kristy dia maty ho antsika fony mbola mpanota isika (Romana 5,8). Tsy misy fitiavana lehibe noho ny maty ho an'ny olona iray5,13). Ka tia antsika Andriamanitra. Azo antoka izany. Na inona na inona, dia tia antsika Andriamanitra.
Ho antsika kristianina, ny fanontaniana lehibe indrindra dia ny hoe ho tia an'Andriamanitra ve isika na dia mihamangatsiaka aza? Aoka tsy hamitaka ny tenantsika isika fa mino fa tsy aran'ny fitsapana sy ny fijaliana ny Kristianina. Misy zavatra ratsy eto amin'ny fiainana, na manao toy ny olo-masina na mpanota isika. Tsy nampanantena antsika Andriamanitra fa tsy hisy olana amin'ny fiainana Kristiana. Moa ve Andriamanitra tia antsika amin'ny fotoana sy ny ratsy?
Ny razantsika ara-Baiboly dia efa nieritreritra izany. Andao hojerentsika izay hevitra noraisiny:
Habakoka: “Tsy haniry any ny aviavy, ary tsy hisy zava-maniry eny amin’ny voaloboka. Ny hazo oliva tsy mamoa, ary ny saha tsy mamoa; Ny ondry dia hesorina avy ao amin'ny vala ary tsy hisy omby ao an-tranon'omby. Fa izaho kosa dia te-hifaly amin’i Jehovah sy ho ravoravo amin’Andriamanitra, famonjena ahy.” (Habakoka 3,17- iray).
Mika: «Aza mifaly amiko, ry fahavaloko! Raha mandry koa aho, dia hifoha; ary na dia mipetraka ao amin’ny maizina aza aho, dia Jehovah no fahazavako” (Me 7,8).
Joba: “Ary hoy ny vadiny taminy: Mbola mitana ny fivavahanao ihany va ianao? Lazao an'Andriamanitra dia maty! Fa hoy izy taminy: Tahaka ny tenin'ny vehivavy adala ny teninao. Efa nandray ny tsara tamin’Andriamanitra ve isika ary tsy tokony hanaiky ny ratsy koa? Tamin’izany rehetra izany dia tsy nanota tamin’ny molony Joba » (Joba 2,9- iray).
Tena tiako ny ohatra an'i Schadrach, Meschach ary Abed-Nego. Rehefa norahonana hodorana velona izy ireo, dia nilaza fa fantany fa afaka mamonjy azy ireo Andriamanitra. Na izany aza, raha nifidy ny tsy hanao an’izany izy, dia tsara ny manao izany. (Daniel 3,16-18). Ho tia sy hidera an’Andriamanitra izy ireo na inona na inona fanapahan-kevitra noraisiny.
Ny fitiavana sy fiderana an'Andriamanitra dia tsy fanontanian'ny fotoana tsara na ratsy, na mandresy na resy isika. Ny momba ny fitiavana azy sy ny fahatokisany azy no mitranga. Rehefa dinihina tokoa, izany no karazana fitiavana omeny antsika! Mahereza amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra.